Sary nindramina Sary Gasypatriote
Fanodinkodinam-bola tao amin’ny « Office de la Radio et de la Télévision publique de Madagascar (ORTM), tao anatin’ireny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2018, naha Tale jeneraly azy no anisany anejehana azy sy ny mpiara-miasa iray taminy nisahana ny « marketing » tao amin’ny ORTM.
Ny Bianco no nisahana ny fanadihadiana. Natolotra ny Pôle Anti-Corruption (PAC) taorian’izay. « Sous contrôle judiciaire » i Johary Ravoajanahary raha ny didy nivoaka ny 14 oktobra 2020.
Tsy nahafapo ny mpitondra fanjakana manenjika azy anefa io didy io. Naverina tany amin’ny Bianco indray ny raharaha, dia tonga teny amin’ny PAC dia izao niafara amin’ny fitanana am-ponja vonjimaika izao.
Dia voaporofo indray teto fa voatohitohina ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ny mpitsara, hoy ny avy amin’ny fiarovana an’i Johary Ravoajanahary.
Raha ny loharanom-baovao dia vola nanomanana sy nanamboarana ny « plateau » nandraisana ireo kandida filoham-pirenena, nifandahatra tamin’ny adihevitra nivantana tamin’ny haino amanjerim-panjakana nandritra ny fampielezan-kevitra io mahavoasaringotra an’i Johary Ravoajanahary io.
Navoaka tamin’ny kitapom-bolan’ny ORTM, noho ny antony ara-potoana, ary narotsaky ny CENI nony taty aoriana.
Etsy ankilany anefa dia milaza ireo akaiky an’i Johary Ravoajanahary fa nahazo fankasitrahana tamin’ny Filankevi-pitantanana, ny minisitry ny serasera sy ny mpitondra tamin’izany fotoana ary ireo mpiara-miombon’antoka tamin’iny fifidianana iny ny fitantanan’i Johary Ravoajanahary tao amin’ny ORTM.
Mpanao gazety, mpanao fanadihadiana, mpamokatra fandaharana i Johary Ravoajanahary. In-droa voatendry ho Tale jeneralin’ny ORTM izy. Tamin’ny tetezamita, sy teo anelanelan’ny novambra 2016 - aprily 2019.
Tato anatin’ny iray volana izao, dia mpanao gazety roa no nidoboka am-ponja ao Antanimora, dia Rahajason Harry Laurent na Rolly Mercia sy Johary Ravoajanahary.
(Sary nindramina Sary Gasypatriote)